Fieldboom: Forms Smart, Surveys ary Quiz | Martech Zone
Ny tsena ho an'ny fampiharana endrika dia be atao. Nisy orinasa manodidina izay mitantana ny fampandrosoana endrika efa ho folo taona mahery eo amin'ny tranonkala, saingy matetika ireo teknolojia vaovao dia manana traikefa ambony noho ny mpampiasa, fanomezana lojika sarotra, ary fampidirana taonina. Mahafinaritra ny mahita an'ity sehatra ity mialoha be.
Mpitarika iray any Fieldboom, izay misy ny mampiavaka azy:
Valiny - Ampidiro ao anaty fanontaniana iray na valiny ny valiny iray tamin'ny fanontaniana teo aloha Misaotra anao lamba.
Valin'ny valiny - Mametraha olona mifototra amin'ny valiny ary asehoy ny pejy fisaorana Misaotra anao na alefaso URL mifototra amin'ny isa azony.
Fandraisana API - Midira amin'ny API developer developer feno an'i Fieldboom hanosika sy hisintona valiny, hamorona tatitra manokana sy maro hafa.
ny fandraisana ho mpikambana - Mandefasa ho azy fanamafisana, misaotra anao na mailaka amin'ny dingana manaraka ho an'ny olona rehetra mameno ny endrikao na fanadihadiana.
Editor - Manamboara endrika sy fanadihadiana amin'ny alàlan'ny tonian-dahatsoratry ny point-and-click ao anatin'ny minitra vitsy. Tsy mila fahaiza-manao na haitao.
Mampakatra rakitra - - Ataovy mora amin'ny olona ny mampakatra rakitra amin'ny alàlan'ny endrikao, ao anatin'izany ny PDF sy ny karazana rakitra lehibe kokoa.
Integrations - Ampifanaraho ho azy ny valiny amin'ny CRM, rindrambaiko mailakao na fampiharana 750+ hafa ao amin'ny tsindry vitsivitsy monja.
Labels - Mamorona sy mampihatra marika amin'ny valiny. Ohatra, azonao atao ny manasokajy ny mitarika mankany amin'ny Hot, Warm ary Cold mba hanarahana fanarahana mora.
Notifications - Ampahafantaro ny valiny vaovao amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana marobe ao anatin'izany ny fampandrenesana mailaka, Slack ary desktop.
Options - Raiso ny daty sy ora voatondro, Score Promoter Net, ary safidy hafa voarindra.
fandoavam-bola - Mamorona fitsipika manokana momba ny vidiny mifototra amin'ny isa fanaovana valiny ary raiso ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny Stripe na Paypal.
Personalization - Ampitomboy ny tahan'ny fahavitana amina hafatra arahaba fanao ary misaora ny olona amina hafatra fanao rehefa vita izy ireo.
redirect - Mandefasa olona amin'ny tranokalanao, bilaogy na fivarotana an-tserasera raha vantany vao nahavita ny endrikao na fanadihadiana.
tatitra - Jereo ny fironana sy ny fomba fijery manerana ny valinteny rehetra amin'ny alàlan'ny tabilao sy tabilao fitateranay mahery.
manaiky - Ny fanadihadiana rehetra sy ny fanontaniana dia mijery sy mahatsapa tsara amin'ny fitaovana finday na tablette.
Skip Logic - Ampiasao ny lojika skip mba hanovana izay hitan'ny olona manaraka, mifototra amin'ny valintenin'izy ireo amin'ny fanontaniana ankehitriny.
Fieldboom dia mora azon'ny olona ampiasaina, nefa matanjaka ampy hamoronana automatique marani-tsaina izay hanampy amin'ny fampiroboroboana haingana ny orinasanao.
Safidy finday Fieldboom
Laharana finday Fieldboom
Thumbs finday Fieldboom
Andramo maimaim-poana ny Fieldboom!
Tags: valiny fantsonavaliny isafieldboomendrika apifampidirana endrikafandoavam-bolafanodinana endrikaendrika fanaovana tatitratenyisa mpanentana netfandoavam-bolapaypalQuizzesfamaritana valinyendrika mamalymandingana ny lojikaSmart Formsmivatrafanadihadiana
Ny fivoaran'ny fanatsarana ny motera fikarohana: Miaraka amin'ny torohevitra SEO maimaim-poana